Horseed vs Raadsan: Muddo dheer kaddib horyaalka Somali Premier League oo maanta dib loo amba-qaadi doono – Gool FM
Horseed vs Raadsan: Muddo dheer kaddib horyaalka Somali Premier League oo maanta dib loo amba-qaadi doono
(Muqdisho) 18 Juun 2020. Horyaalka Somali Premier League ayaa dib loo amba-qaadi doonaa maanta, maadaama muddo labo bilood iyo bar uu hakad ku jira sabab la xiriirta caabuqa Coronavirus kaas oo dunida sameyn weyn ku reebay.
Sanadkan horyaalka Somali Premier League waa mid aad u xiiso badan marka loo eego sanadihii ugu dambeyay, maadaama ay ku tartamayaan dhowr kooxood oo aad u waa weyn.
Haddii aan dib idin xasuusiyo kulankii ugu dambeyay horyaalka laga dheelo ka hor xanuunka COVID-19 waxaa wada ciyaaray kooxaha Jaziiro Sports Club iyo Midnimo Football Club ciyaartaas oo dhacday 18-bishii Maarso 2020, kulankaas ayaa xilligaas ku soo dhammaaday 2-1 ay midnimo ku adkaatay.
Kooxaha Horseed iyo Raadsan ayaa galabta wada dheeli doona kulan hore loo calaamadeeyay inuu dhaco balse Caabuqa COVID-19 uu baajiyay, taas oo ka dhigan inuu dib u soo laabtay hardankii horyaalka loogu jiray.
Hoggaamiyasha horyaalka Somali Premier League ee Horseed ayaa sanadkan ku jirtay bandhigii ugu fiicnaa ebid marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay kooxda, maadaama ay hoggaanka heeso, iyado leh 22-dhibcood kaliya hal dhibcood ayey ku haysaa kooxda cawo iyo maalin ee Horseed.
Naadiga Raadsan ayaa ku jirta booska 7-aad ee kala sarreynta horyaalka, iyadoo leh 14 dhibcood.
Labadan kooxood kulankii ugu dambeeyay ay is arkaan wajiga hore horyaalka waxaa 4-2 ku adkaatay naadiga Horseed kulan ciyaareed dhacay 13-01-2020.
Kooxda Horseed kulanka galabta waxaa dhaawac ugu maqnaanaya xiddigeed khadka dhexe ee Xasan Cabdi Nuur Geeysey (Xasaasi), kaas oo dhaawac ka qaba seedka lugta midig.
Horseed waxaa macquul ah inay khadka dhexe ay ciyaartaan dheelsiiso xiddigaha kala ah; Ibraahim Rasta, Qubaaye iyo Hanad Yare, maadaama uu ka maqan yahay Xasaasi.
Raadsan kulankii ugu dambeeyay horyaalka ay ka dheesho waxay 4-0 ugu soo adkaatay naadiga Rajo football Club.
Kooxda Horseed ciyaartii ugu dambeysay horyaalka ay ka ciyaarto waxay barbaro 0-0 la soo gashay kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club.
Wiilasha Raadsan kulan ciyaareedka galabta waxaa ka maqnaan doona xiddigaha kala ah Baaba oo khadka dhexe ugu dheela kaas oo ku maqnaan doona kaarar digniinta oo u aruuray, halka sidoo kale xiddiga weerarka ugu dheela ee Mohamed Kyeline uu kulankan weyn ku seegayo kaarka cas.
Kooxaha: Raadsan vs Horseed
Jawiga Garoonka: 26°c
Horudhac: Real Madrid vs Valencia … (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Zidane kooxdiisu ay tijaabada adag mareyso caawa)
Garoonka Eng Yariisow oo galabta marti-galinaya kulan Taageero la'aan ah